Barasiil - Howling Pixel
- President of theChamber of Deputies Rodrigo Maia
Boga "Latin Amerika" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Ameerikada koonfureed waa qaarad ku taalo koonfurta ameerika.
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) waxa ay ku taala magaalada Rio de Janeiro, Barasiil.
Curitiba (kuɾi'tibɐ) (1,788,559 oo qof) waa magaalo ku taala dalka koonfur Barasiil.
Kani waa maqaal ku saabsan guud ahaan dad cad. Maqaalo kale fiiri dadka cad ee reer Yurub.Dadka Cad (ingiriis: white people; carabi: عرق أبيض) isir ahaan loo yaqaano "Qooqaasiyaan" (causcasian) waa dad midab cadaan ah leh kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda qaarada Yurub laakiin maanta ku nool meelo badan oo aduunka ah.
Waxa uu ku yaalaa wadankani ameerikada waqooyi. Caasimadiisu waa karaakaas. Waxa hada kataliya madaxwayne Nicolás Maduro.
Faransiiska (Af-Faransiis: La France; Af-Carabi: فرنسا) sida dowliga ah loo yaqaano Jamhuuriyadda Faransiiska (Af-Faransiis: République Française; Af-Carabi: الجمهورية الفرنسية) waa dalka mid ah dalalka kuyaala galbeedka qaarada Yurub. farnsiisku waxa uu kakoobanyahy dhul kal fog fog iyo jasiirado kuyaala goobo aad uga fog dhulwaynaha faransiiska waxa kale oo farnsiiska kamida halka looyaqaano Faransiis Guyana iyo jasiirado aad ubadan oo cidhifyada caalamka kuyaala dadka wadanka farnsiiska udhashay waxa wadankooda ay uguyeedhaan (Hexagone) oo macneheedu tahay Lix geesood. wadanka farnsiisku waxa uu xuduud la wadaagaa Wadamada
Midowga boqortooyada Britan Beljim Luksemburg Jarmalka Iswisarland Talyaaniga Monako Andorra Isbania sida oo kale farnsiisku waxa uu xuduud la wadaaga wadamo kabaxsan qaarada Yurub sida, Barasiil Surinam Nederlaan Antiilis. Farnsiisku waa mid kamida Aasaasayaasha Midawga Yurub.waana wadanka ugu wayn midawga yurub. sidoo kale waxa uu farnsiisku kamid ahaa xubnihii aasaasy Qaramada Midoobay.waxa kale oo kamidyahay xubnaha rigliga ah ee Golaha Amaanka inta badan dadka farnsiiska ahi waxa ay haystaan diinta Masiixiyad waxa kunool sidoo kale dad gaadhaya ilaa shan milyan oo haysta diinta Islaamka
Ecuador waa dal dhexdhexaad ah, oo leh dhaqaale horumarineed oo aad ugu tiirsan badeecadaha, sida shidaalka iyo waxyaabaha beeraha. Waxaa lagu maamulaa Jamhuuriyad madaxbanaan. Mid ka mid ah 17ka dal ee dunida oo adduunka ah,   Ecuador waxay martigalisaa dhirta iyo xayawaan badan, sida kuwa ku yaalla jasiiradaha Galápagos. Aqoonsiga hiddaha khayraadka ee gaarka ah, dastuurka cusub ee 2008 waa kan ugu horreeya aduunka si uu u aqoonsado Xuquuqda Dabeecadda, ama xuquuqda deegaanka.
Instituto Federal da Bahia (IFBA) waxa ay ku taala magaalada Salvador, Bahia, Barasiil.
Kolombiya (República de Colombia) Waa jamhuuriyad kutaala, Ameerikada koonfureed.Dahnka waqooyi waxay xuduud kala wadaagtaa,Badda Karabiya.dhanka bari waxa kaga aadan wadamada Fanansuwela.iyo Barasiil dhanka koonfureedna waxa kaga beegan wadamada Peru iyo Ikwadoor galbeedkana Banama iyo Badweynta Baasifik. caasimad waxa u ah Bogota
Pawlo Kuwelho (Paulo Coelho), waa qoraa wayn waxa uu u dhashay wadanlka barasiil
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) waxa ay ku taala magaalada Belo Horizonte, Minas Gerais, Barasiil.
Sidoo kale, magaaladan Saw Bowlo waa caasimada iyo magaalo madaxda Sow Bawlo, oo ah deegaanka ugu dadka badan wadanka Baraasiil.
Magaaladani waa xarun ganacsi, waxbarasho, diin, madadaalo iyo bar-tilmaameed dalxiise.
São Paulo (Gobol)
São Paulo waa gobol ka mid ah Gobolada dalka Baraasiil. Gobolkaan caasimadiisa waxaa la dhahaa São Paulo.
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) waxa ay ku taala magaalada Feira de Santana, Bahia, Barasiil.
Universidade Federal da Bahia (UFBA) waxa ay ku taala magaalada Salvador, Bahia, Barasiil.
Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC) waxa ay ku taala magaalada Belo Horizonte, Minas Gerais, Barasiil.
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) waxa ay ku taala magaalada Belo Horizonte, Minas Gerais, Barasiil.